बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले १३ वर्ष अगाडी दिएको १७ करोड कर्जा काण्ड प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमाः सञ्चालकद्वय पन्त र सुवेदी सहित दर्जनौ माथी बैंकिङ्ग कसुर ? - Aathikbazarnews.com बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले १३ वर्ष अगाडी दिएको १७ करोड कर्जा काण्ड प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमाः सञ्चालकद्वय पन्त र सुवेदी सहित दर्जनौ माथी बैंकिङ्ग कसुर ? -
thesis writing services in noida haverford creative writing coursework writer uk bartleby homework help reviews cover letter for writer post audison thesis price primary homework help co uk victorians industrial revolution cover letter for creative writing submissions i am doing my homework right now mfa programs creative writing in us need help with resume and cover letter masters of creative writing editing and publishing write essay for me uk creative writing intensive course creative writing escape compare contrast essay writer essay about myself asawriter creative writing professional where can i get an essay written for me college athletes getting paid proposal essay law school personal statement help reddit description of relief creative writing cover letter help uk creative writing new orleans star wars creative writing prompts folk house creative writing creative writing camp atlanta things to do my research paper on cardiff met ma creative writing homework help in usa
राधेश पन्त र महाप्रसाद अधिकारीबीच कुनै बेला कसले पद पाउने भन्ने बारे मुद्दा नै चलेको थियो त्यो पनि नेपाल लगानी बोर्डको सीइओमा भन्दा फरक पर्दैन । यहि तितो घाउँको असर अहिले बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड भित्र पुगेको छ भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला ।
समय परिवर्तनशील छ हिजो कांग्रेसको सरकारले नेपाल लगानी बोर्डमा राधेश पन्तलाई सीइओ बनाएको थियो । चुनाव पछि आएका हालको सरकारले हालका राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सीइओ बनायो । यी दुई पात्र बीच लामो विवाद भयो मुद्दा पनि चल्यो । हालका गर्भनरले नै सास्ती पाए । यहि कुराको बदला लिँदै पूरानो १३ वर्ष अगाडीको १७ करोड कर्जा पारित गर्ने राधेश पन्त, अजय श्रेष्ठ र कर्जा लिने हेमराज सुवेदी जमानी बस्नेहरु श्रीहर शम्शेर जवरा, किरण शेखर अमात्य, यशोस्विका राज्यलक्ष्मी राणामाथी छानवीन गरि कारबाहिको तयारीको लागि फाईल नेपाल प्रहरीको सीइर्आबीमा पठाउने तयारी भइरहेको भेटिएको छ ।
भनिन्छ बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले १३ वर्ष अगाडी दिएको ८ करोड कर्जा अहिले १७ करोड भन्दा बढि साँवा, ब्याज भएको छ । यो कर्जा उठेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कर्जा ३५ दिन भित्र उठाउन बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले पत्र विओकेलाई पठाउदै ३५ दिन भित्र कर्जा नउठाए नेपाल प्रहरीको सीइआईबीमा लेखि पठाउने समेत जनएको भेटिएको छ ।
भनिन्छ राष्ट्र बैंकले ऋणी कम्पनी ग्रीनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिका संचालक, व्यक्तिगत जमानीकर्ता र बैंकका पदाधिकारीमाथि कारवाही अगाडि बढाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई लेखेर पठाउनसमेत बैंकलाई निर्देशन दिइएको देखिन्छ ।
कर्जा दिँदा पन्तसहित तत्कालिन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) अजय श्रेष्ठ (पछि सीइओ भएर बाहिरिए), सागर थापा, राज रिमाल र सुनिग्धा थिइन् । यो ऋण भुक्तानी नभएमा पन्तसहितका सबैलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बैंकले सीआईबीलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । ग्रीनलाइनलाई ऋण दिँदा बैंकको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट सीधा देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि पनि विओकेले कुनै चासो दिएको देखिदैन । हेक्का होस् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित ड्युटी फ्री पसलका लागि यो ऋण दिइएको थियो । ऋण उठाउन बैंकले ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा हालेको पनि थियो । तर, न्यायधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । फैसलापछि पनि ऋण उठेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको २०७५ सालमा आएको स्थलगत सुपरिवेक्षण टोलीले यो ऋणलाई कैफियत लेखेको थियो । त्यही कैफियतका आधारमा ऋणीसँगै जमानी बस्ने सबैलाई कारवाही गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
यो बैंक अफ काठमाण्डूले २०६४ सालमा दिएको कर्जा हो । त्यसबेला बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष सञ्जय शाह थिए भने प्रबन्ध निर्देशकमा हालका बैंक संचालक राधेश पन्त । हेक्का होस् ।
ग्रीनलाइनको प्रोमोटरमा डम्बरबहादुर मल्लसहितको टीम थिए । डम्बरका श्रीमती रिता मल्ल बैंक अफ काठमाण्डूकी संचालक थिइन् । पतिको सेयर रहेको कम्पनीमा आफू संचालक समितिको सदस्य रहेको बैंकबाट ऋण दिइएको थियो । संस्थापक भएर ऋणीको खाता सञ्चालन गर्न नपाइने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा ब्यवस्था थियो । तर, त्यो लागु भएन ।
यस्तै कम्पनीको अर्का संचालक प्रा.डा. हेमराज सुवेदी छन् । उनी अहिले विओकेको संचालक छन् । कानुनी प्रक्रिया मिचेर ऋण दिएको ठम्याई राष्ट्र बैंकको छ । यसरी कानुन मिचिएर दिएको ऋण नउठेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्काल उठाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनेको छ– उक्त ऋण बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरित कर्जा दिएको देखिन्छ । जब नेपाल लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सूचना निकाल्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा तात्कालिन सीइओ राधेश पन्त र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । सरकारले पन्तलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अधिकारीलाई नियुक्ति दियो ।
हालका सञ्चालक सुवेदीको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले कैफियत लेखेपछि सुवेदीलाई संचालक समितिबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनी अदालतबाट मुद्दा जितेर फेरी संचालक छन् । राष्ट्र बैंकले उनीलगायत यो ऋणसँग सम्बन्धित सेयरधनी÷प्रबर्द्धकहरुको लाभांश पनि दुई बर्षसम्म रोकेको थियो । ऋणीबाट पैसा उठाउन सकिँदैन बरु लाभांशबाटै पैसा उठाउने भनेर बैंक ब्यवस्थापनले नयाँ जुक्ति लगाएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले नै लाभांश नरोक्नु भनेर निर्देशन दियो ।
राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउन लेखेको पत्रमा बैंकका तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (शाह) एवं संस्थापक (मल्ल, सुवेदी) को स्वार्थ बाझिने कम्पनीलाई कर्जा लगानी भएको देखिएकोले ३५ दिनभित्र ऋण उठाउन भनिएको छ । पत्र अनुसार, बैंकले त्यसबेला हेमराज सुवेदीको सेयर किन्ने अमृत सुवेदीलाई मुद्दा दायर नगरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनेको छ– उक्त ऋण बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ को दफा ७ (ञ) र दफा ९ अनुसारको ब्यवस्थाको विपरित कर्जा दिएको देखिन्छ । जब नेपाल लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सूचना निकाल्दा अन्तिम प्रतिस्पर्धामा तात्कालिन सीइओ राधेश पन्त र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । सरकारले पन्तलाई छाडेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अधिकारीलाई नियुक्ति दियो ।
कार्यकाल बाँकी छँदै लगानी बोर्ड छाडेर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । उनी गत चैतमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गभर्नर बनेर आएपछि १३ वर्ष अघिको मुद्दामा पन्त समेतलाई कारवाही अगाडि बढाउनुलाई पुरानो रिस साँधेकोरुपमा बैंक अफ काठमाण्डूको सञ्चालकहरुको बुझाई छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
पन्तले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रमुख कार्यकारी हुन नसक्ने दलिल प्रस्तुत गर्दै अधिकारीलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने भन्दा फरक पर्दैन । कुरोको चुरो चाहि यहि हो भन्दा फरक पर्दैन । कार्यकाल बाँकी छँदै लगानी बोर्ड छाडेर अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । उनी गत चैतमा नियुक्त भएका हुन् । उनी गभर्नर बनेर आएपछि १३ वर्ष अघिको मुद्दामा पन्त समेतलाई कारवाही अगाडि बढाउनुलाई पुरानो रिस साँधेकोरुपमा बैंक अफ काठमाण्डूको सञ्चालकहरुको बुझाई छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
जे भएपनि जनताको डिपोजिटबाट जम्मा भएको पैसा कर्जा लगानी गरि १३ वर्ष सम्म नउठाउनु र उठाउन पहल नगर्नु, आफ्नै बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी बचाउन लाग्नुले बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको नियतमा खोट देखिन्छ । हेक्का होस् ।
पटक÷पटक कर्जा काण्ड घटेको बैंक अफ काठमाण्डूका तत्काली सीइओ अजय श्रेष्ठ २ महिना जेल बसेको घटना हामी सामू छ । त्यसकारण जनताको रगत र पसिनाको पैसा उठाउन तत्कालै राष्ट्र बैंकले पहल गर्नु पर्दछ र दोषी माथी कारवाही हुनु जरुरी देखिन्छ । सचेत भया ।
सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको निमित्त सिईओको जिम्मेवारी खड्कालाई